कुर्सीकपका खेलाडीहरुको दर्ता आज « नेपाली मुटु
« राकेश सुदलाई असारको १५
दाहाल, पौडेल र खनालको दाबेदारी »
कुर्सीकपका खेलाडीहरुको दर्ता आज
Posted by नेपाली मुटु on July 20, 2010
नेपाली कुर्सीकपको ३४ औ संस्करण भोली हुदैछ । यो संस्करण पनि नाटकिय बन्दै गइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ । कस्को हैसियत कति छ भनेर थाहा पाउँने कुर्सीकप सही समय हो । यो कुर्सीकपका खेलाडीहरु नाटकमा पनि कति अभ्यस्त छन्, विगतका घटनाहरु हेर्दा थाहा भइहाल्छ । आज दिन भरि यस्तै नाटकहरु हेर्न पाइन्छ । नाटक अस्ति नै देखि सुरु भइसकेको छ । जसले राम्रो नाटक देखाउँछ, कुर्सीकपका लागि त्यो निकै योग्य मानिनेछ । यो कुर्सीकप विजयी बन्नेले नेपाल मुलुकको ३४ औ प्रधानमन्त्री बन्न पाउछ । यो चानचुने कुरो पनि त होइन नि । यसैले यो खेलमा दिलोज्यान दिएर नैतिकता र आदर्शलाई चट्टक्कै बिर्सेर पनि लागि परेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका झलनाथ खनाल र माओबादी उपाध्यक्ष बाबुरामको नाम हिट लिस्टमा छ । तर अन्त्यमा यी बाहेक अरु कसैले पनि बाजी मार्न सक्ने सम्भावना नकार्न मिल्दैन । माधवकुमार यसको साक्षी बसीरहेका छन् । कस्ता छन् त सम्भावित खेलाडी
अध्यक्ष क. प्रचण्ड:
माओवादीका अध्यक्ष कमरेडले त एक बर्षमा धेरै पटक आफ्नो उम्मेदवारी दिइसकेका छन् । तर उनकै उपाध्यक्ष उनका कडा प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएका छन् । बाहिरबाट एकदमै बाबुरामको प्रचार उठाएर प्रचण्डलाई तह लाउँने सुनियोजित षड्यन्त्रमा प्रचण्डलाई यो खेल नखाउँ त दिनभरीको शिकार, खाउँ त कान्छा बाउको अनुहार भएको छ ।
कहिलै द्धितिय नभएका भनिएका भट्टराईले पनि कुर्सीकपका लागि आफ्नो मोह देखाइ नै रहेका छन् । हिजो माओवादीको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने झलनाथ खनाललाई सघाउने भनी निर्णय गर्यो भन्ने खबर आउने बित्तिकै भट्टराईले त्यसको खण्डन गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा कायम रहेको सन्देश दिएका छन्। मधेसबादी दल र एमालेबाट पनि उनले समर्थन पाउँने कुरा उनका निकटस्थहरु बताउँछन् ।
कुर्सीकपमा अन्तिम समयमा आफ्नो दल भित्रबाट सर्वसम्मत देखिएका पौडेल गठबन्धनबाट सर्वसम्मत हुने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ । एमालेका ओली पक्षधर जसरी भएपनि झलनाथ विजयी नहुने भन्दै पौडेलको नजिक देखिए पछि उनको सम्भावनालाई पनि कम आँकिएको भने छैन । केहि गरि एमालेमा कुरा मिले उनी यो कुर्सीकपमा पराजित हुनेछन् ।
झलनाथ बिचरा न त पार्टीबाट सर्वसम्मत छन् न बाहिर । उनको सम्भावना पनि कम नै छ । माओवादीबाट सर्मथन हुने सम्भावनामा उनी निकै नै उत्साहित छन् । पार्टी भित्र उनी प्रधानमन्त्री भए कार्यवाहक अध्यक्ष कसलाई बनाउँने भन्नेमा विवाद उचालिएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री समर्थन गरे वापत ओलीलाई संविधानसभामा ल्याउँनु पर्ने माग ओलीपक्षको छ । हेरौ उनी यो खेलमा बिचमा पर्छन् या छेउमा ।
अरु को ?:
अरु कोही नै कुर्सीकपमा चुनिने सम्भावना पनि नकार्न सकिदैन । ३३ औ कुर्सीकपमा एक्कासी छर्लाङ मारेर किर्तिमान बनाएका माधवकुमार नेपालको इतिहास अगाडी नै छ । यसैले कुर्सीकपमा सबैको सम्भावनालाई कायम राखिएको छ । तपाईको बिचारमा कसले जित्ला त कुर्सीकप ?
This entry was posted on July 20, 2010 at 10:06 am	and is filed under समाचार/सन्दर्भ. Tagged: कुर्सीकप, खेलाडी, दर्ता. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.